Want isigwebo okanye inceba? | Apg29
Kuyinto ubabalo elisindisa akukho umgwebo.
Yaye ngoobani abo kakhulu ndingxamele ukuzishumayela iindaba malunga uThixo ezigwebayo? Kaloku, bona ngokwabo ngaphambili ukubabalwa okukhulu baza basinda uYesu. Grace ngoku ukhangeleka awusebenzi kwabanye, kuphela ngokwabo.
Kukho amaKristu afuna kubo. Oko ukufunda iBhayibhile kunzima ukubona hayi. Kufuneka ufunde umthetho umusa. , Ngaba isiko ukuba ufuna ukuba sifana uYona waza wahlala phantsi konwele, baqumbe. Ngoko ayimangalisi into, kodwa kukho amaKristu amaninzi uJona namhlanje. Ingakumbi ngoku ukuba nabani na ukundazisa kwi Internet izimvo zabo.
Ngoko ke, uYesu weza
UYesu weza ukungazithumeli kuwo phezu kwabantu. Lowo weza kusindisa usisindise. Yintoni eyenza le nto kunzima kangaka ukuyiqonda? Yaye ngoobani abo kakhulu ndingxamele ukuzishumayela iindaba malunga uThixo ezigwebayo? Kaloku, bona ngokwabo ngaphambili ukubabalwa okukhulu baza basinda uYesu. Grace ngoku ukhangeleka awusebenzi kwabanye, kuphela ngokwabo. Baya ngqo ukuba umthetho xa wona ngokwawo nenzelwe inceba. Ngokwabo, akaba nako ukuyenza umthetho, kodwa ngoku ukubuza abanye ukuba ayigcine. Njani ukuba izinto zingahambi kangaka?
UYesu andize kuligweba ihlabathi, weza kusindisa, kwaye ugcine loo nto. Oku kwiminyaka engama 2,000. UYesu enye namhlanje. Than kuza ngobabalo lukaYesu. Kukho Ixesha eliseleyo ukwamkela uYesu basindiswe nangoku. Unyaka ubabalo yaqala emvakalisa uYesu nangoku. UGrace into ufumana simahla ngaphandle ifanelwe kuyo. ixesha ngobabalo lukaThixo ndiyinto kuyasebenza namhlanje. Yena ayikatshintshi.
Dom phezu Sweden
Kukho incwadi classic ebizwa ngokuba "Isigwebo yaseSweden". Le ncwadi ibhalwe ngu Birger Claesson owabangela imibono kwi 1950 ekuqaleni ukuba malunga Sweden uhlaselwa ngurhulumente engenagama. kwizixeko ezahlukahlukeneyo Swedish yadilizwa emhlabeni. Ngenxa Birger Claeson umyalezo yesiprofeto kulowo imvuselelo ecaweni ezicaweni simahla yaye abaninzi bathandaza kuThixo.
Umxholo Le ncwadi, ndikuncame kunganqandwa, kodwa ngokwemiqathango isihloko, ndifuna ngokufutshane izimvo. "Isigwebo yaseSweden", oko nengcindezelo ngokwenene? Ukuze siphendule lo mbuzo kufuneka ukufunda kuphela Yohane 3:17. Ithi ngokucacileyo ukuba uThixo akazange athumele uYesu ukuze aligwebe ihlabathi, kodwa ukuyigcina. Ukuze wenze kube kucace gca: UThixo akazange athumele uYesu ukugxeka Sweden kodwa ukuyigcina.
Kwaye ukuba kusebenze ngakumbi: UThixo akazange athumele uYesu zethu ukuba sife nani, kodwa ukuba ndisindise! Abanye ababhala namhlanje ngesono zabantu ithi uThixo uya kubagweba kobu bomi, kodwa uYesu engafikanga ukugxeka aboni, uze kusindisa.
Ndiye isiprofeto "Isigwebo yaseSweden" epapashwe kwi site yam blog. Kodwa xa wakha phezu blog site okwethutyana ke sathatha phezu kwamawaka amanqaku amadala ukuqala ukusuka kwiqanda. Phakathi kwabo kwakukho "Isigwebo yaseSweden" kunye.
Nje enye imini I got ye-imeyile ngumsindo umntu. e-mail ngokupheleleyo yayibhalwe noonobumba, nto leyo eyenza kube nzima ukufunda. Umshicileli imeyile babuza kutheni ukuba kususwe isiprofeto wathi ukuba andizange oko umva, ndiya mna "zamaKristu yokwenene".
Ndandicinga ngoko nangoko ukuba akukho amanqaku uMsindisi ngaphandle Yesu! Into endenza ndibe i "ngumKristu benene" ukuba ndithe uYesu yaye ukuba unayo na amanqaku ezithile.
kufuneka ke ngoko email umshicileli athathwa ngcono ufumanise ukuba kutheni le nto zithathiwe. Kwaba ngoko phezu inqaku ngokwayo, kodwa blog ukuqala. Ngaphambi kokuba imeyile mna kuqwalaselwa kwakhona apapashe le nqaku, kodwa ngoku ndicinga uyayi njalo.
Ngamanye amaxesha enikina ihlabathi lethu namhlanje iimfazwe neentlekele. Kodwa le nto ukuba uThixo uthumela. Iimfazwe neentlekele ezenzeka kodwa akukho umgwebo kaThixo. Kodwa uThixo uye wamthuma ehlabathini, uYesu ukusindisa bonke abakholwayo kuye. Kukho umahluko omkhulu kuYesu okanye izigwebo.
Ndakhe wabona iindaba on TV ngendoda wadanduluka lithemba kwaye wagxeka uThixo xa kubanjwe unyana wakhe ofileyo ezingalweni zakhe lowo wafa yintlekele:
"Thixo, kutheni le nto usithabathileyo nyana wam kum?!"
Kodwa nangoko ndacinga ukuba uThixo wabo wambulala unyana wakhe.
kwiintsuku ezimbini ngaphambi Eva Christmas 2008 bafa umfazi wam Marie nonyana omncinane Joel ngeengalo zam. Kamva kwafika i e-mail ukuba ngubani wazibuza ukuba kutheni uYesu wambulala Marie noYoweli. Kakade ke, mna andizange ukuphendula iposi. Kodwa ukuba andizange uYesu, ngubani ke ngoko baya uncedo kunye nenkxaso? UYesu wasindisa Marie kwaye ukhuselekile ezandleni zakhe, nokuba kwenzeka ntoni. Wayekulungele nangaliphi na ixesha lako phezulu; ngokuba waba senilungile uThixo ngoYesu Kristu yonke into. Ngoko ke, kubalulekile ukuba sibe uYesu basindiswe. Asinayo iziqiniseko for kusasa.
UYesu weza ukuze asikhulule, ukuba ngumgwebi.
Oku inqaku wesithathu ndinibhalele kule mxholo. ezimbini lokugqibela igama " UThixo ufuna kungekho ntshutshiso " yaye " Yintoni elizayo na nina abantwana bakho? " Kukho uyakhathazeka kunye nokudideka abanye xa kufikwa ubabalo nomthetho. Kufuneka ukuba sibe nangakumbi kwacaca ukuba ukushumayela iindaba ezilungileyo zobabalo kuYesu Kristu. Kuyinto ubabalo elisindisa akukho umgwebo.